အဘယ်ကြောင့်မိုဘိုင်း application များကွဲပြားခြားနား | Martech Zone
အဘယ်ကြောင့်မိုဘိုင်း applications များကွဲပြားခြားနားသည်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 7, 2013 Douglas Karr
ငါမိုဘိုင်း applications များနှင့်ပတ်သက်။ naysayer ခဲ့အချိန်ရှိခဲ့သည်။ ငါ HTML5 နှင့် mobile browsers များရောက်ပြီးချိန်အထိစောင့်ဆိုင်းရတော့မည်ဟုထင်ပြီးအက်ပလီကေးရှင်းများသည် desktop ဆော့ဖ်ဝဲ၏လမ်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် မိုဘိုင်း application ကို မှာအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်သူများကဒီဇိုင်း Postano လုံးဝငါ၏အဟောင်းများကိုအမြင်ဖျက်ဆီးတော်မူပြီ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းမှတ်တမ်းများ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ.
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုကြည့်။ သင်၏စိတ်ကိုလည်းပြောင်းလဲစေသင့်သည်။ စတင်သည့် အချိန်မှစ၍ သုံးစွဲသူ ၂၇၂ ခုသာရှိသော်လည်း၊ ၁၅.၃k ကျော်ကြည့်ရှုနိုင်သောမျက်နှာပြင်များရှိသည် session တစ်ခုအတွက် 14.1 မျက်နှာပြင်အမြင်များ! ထိုအစည်းအဝေးများ၏တစ် ဦး ချင်းစီပျမ်းမျှဖြစ်ပါတယ် ၆ မိနစ်နီးပါး! အကြောင်းအရာသည်ဘုရင်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်သောအကြောင်းအရာမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဤ application သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အမျိုးအစားပေါင်းစပ်ခြင်းမှပေါင်းစည်းထားသော podcast နှင့်ဗီဒီယိုအထိလက်ချောင်းဖြင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီက push သတိပေးချက်များကိုဖွင့်သော stats ၏အမြီးအဆုံးအားဖြင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး လျှင် session များပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်သေချာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများကိုထပ်မံတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ play play ခလုတ်အချို့ကိုဗီဒီယိုပေါ်တွင်တင်ထားရမည် (ကုဒ်ပြီးပြီဖြစ်သည်၊ မအကောင်အထည်ဖော်သေးသည်) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာအချို့ကိုဖော်ပြရန်။
Tags: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ် appမိုဘိုင်း appမိုဘိုင်း application ကိုမိုဘိုင်းမက်ထရစ်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများမိုဘိုင်းအမြင်များဇာတ်လမ်း။
အသံနှင့်ဗွီဒီယိုကူးယူခြင်းလွယ်ကူစေရန် - Speechpad